पोखराको यो मन रुवाउने तस्बिर ! - समृद्ध नेपाल
पोखराको यो मन रुवाउने तस्बिर !
देशैभरी कोरोनाको महामारी फैलिदो क्रममा छ भने मृत्युदर पनि धमाधम बढीरहेको छ । आज मात्रै गण्डकी प्रदेशमा एकै पटक ८ जना को दुखद मृत्यु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा.विनोद विन्दु शर्माका अनुसार होमआइसोलेसनमा बसेका सँगै पोखराका
विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कास्कीका ५ पर्वत दाङ र रुपन्देहीका एक–एक जना गरी जम्मा ८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो यो पनि माइक्राेसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्स र श्रीमती मेलिन्डा गेट्सले स’म्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेका छन्। बिल गेट्सले टु’इटर मार्फत यस्ताे जानकारी गराएका छन् ।
हामीलाई लाग्छ अब हामीसँगै अघि बढ्न सक्दैनाैं,उनले लेखेका छन्। २७ वर्षकाे वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने अवस्थामा पुगेकाे उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराएका हुन्।
धेरै साेच विचार गरेर आफूहरुले वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त गर्ने निर्णय गरेकाे गेट्सले लेखेका छन् । मेलिन्डासँग बिल गेट्सको भेट् सन् १९८७ मा भएको थियोे । उनी बिलकै कम्पनीमा म्यानेजर थिइन्। त्यसको ७ वर्षपछि बिल र मेलिन्डाको बिबाह हवाईमा भएको थियोे। फोर्ब्सको सूचीमा बिल गेट्स विश्वका धनी व्यक्तिको सूचिमा चौथो स्थानमा छन्।
कल्पना मुडभरी पौडेल द्वारा अभिनित सर्ट मुभी बाहिरियो !
हस्पिटलले उपचार गर्न नसकेको बिरामीलाई झाक्रीले निको पारिदिए पछि पविारमा रहेन खुशीको सीमा !
जब पोखरा विमानस्थलमा जहाजमा आगो लाग्यो र मानिसहरु चिच्याउन थाले !
लामो समयपछि मेची क्राउनमा पूर्वयुवराज पारस र पत्नी हिमानीबीच भेट, भयो भलाकुसारी !
सुत्ने बेलामा मोबाइल साईडमा राख्ने गर्नुभएको छ? यस्तो हुन् सक्छ
मेरा लागि प्रहरी संगठन आफैँमा एउटा परिवार हो” : प्रहरी निरीक्षक चेतना पोखरेल
धुलिखेल अस्पतालमा १ जना कोरोना संक्रमितको निधन !
प्रचण्डमाथि जुत्ता हा’नेको भन्दै तस्वीर भाइरल, यस्तो रहेछ बास्तविकता
फेरी बाहिरियो शिल्पा पोखरेलको यस्तो नयाँ काण्ड, धेरै वर्ष पछि बोले छवि ओझा !
दुखद खबर : एकै विद्यालयका ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि !
मीना भन्छिन घरमा राजतन्त्र ल्याउन मन लाग्यो कारण यस्तो !
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने- संघीयता खारेज गरौं:
दुबै हात छैनन् तर हात हुनेहरु भन्दा बढि काम गर्छिन् ,यस्तोसम्म गर्न सक्छिन् !